फेसबुकमा भाेलिबाट आउने नयाँ विशेषता के हाे ? - Mitho Khabar
June 29, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on फेसबुकमा भाेलिबाट आउने नयाँ विशेषता के हाे ?
विश्वभरी लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा नयाँ विशेषता थप्ने तयारी भएको छ। अडियो सामग्री बज्ने सुविधा थप्ने तयारी भइरहेको फेसबुकमा अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्। फेसबुकमा यो सेवा आगामी जुन २२ देखि सुरु हुने जनाइएको छ। कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार अप्रिलमा नै नयाँ विशेषताका बारेमा परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणबाट नतिजा सकारात्मक आएपछि अहिले पुरै तयारीका साथ जोड्न थालिएको हो।
पोडकास्ट सेवा जोडिएपछि फेसबुक एपमा नै सिधै अडियो सामग्रीहरु सुन्न मिल्ने भएको फेसबुक कम्पनीले जनाएको छ। अडियो सेवाका बारेमा इमेल मार्फत जानकारी दिने र जोड्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन्। फेसबुकको न्युजफिडमै अडियो पोस्ट गर्न मिल्ने र त्यही बजाएर सुन्न मिल्ने व्यवस्था हुने भएको छ। कुनै फेसबुक पेजमा अडियो पोस्ट गरेपछि त्यो फेसबुकको पेजमा फलो गर्नेहरुलाई नोटिफिकेसन पनि जाने भएको छ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको क्युरेटरका रुपमा अजय पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ ।
धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको विशेष अनुरोधमा क्यानले पाण्डेलाई १ महिनाका लागि क्युरेटरमा नियुक्त गरेको हो । चितवन पुगेर पाण्डेले मैदान तथा पिचको अवस्था सुधार गर्न सहयोग गर्नेछन् । उनले यसअघि मुलपानी क्रिकेट मैदानमा पनि क्युरेटरका रुपमा काम गरिसकेका छन् ।